ကလိုစေးထူး: လောကဓံ Vs ဇရာ
Troy ရဲ့ သားကလေးရယ်၊ George ရယ်၊ Kathy တို့ရဲ့ ခြားနားချက်လေးကို အသေချာ ခံစားသွားတယ် အစ်က်ို
လောကဓံကို အပြည့်ဝ ခံစားပြီးတဲ့ ခံစားရအုံးမယ့် Kathy ရဲ့ မျက်နှာပေါ်ကသာဓက
အရမ်းကိုဖြူစင်နေသေးတဲ့ လောကဓံ ကျောင်းတော်ကိုတက်ရတော့မယ့် ကျောင်းသားသစ်ကလေး Troy ရဲ့ သားလေး
အထိုက်လျှောက် အတွေ့ကြုံရှိဖူးပြီးဖြစ်တဲ့ George နဲ့သူ ဆိုတဲ့ ဇတ်ကောင်း)
အားလုံးကောင်းပါတယ်ဗျာ ကျနော်လည်း မှန်ကြည့်ရင် သတိထားအုံးမှ ၀က်ခြံတွေကတော့ ခဏခဏ ထွက်တယ်ဗျာ နောက်ဆို တွန့် ပြီး ပါးတွေပြောတာပါးး :P
အကိုစေးထူးရေ ပထမဆုံး ကောမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း လာပြောတာပါ။ အကိုရဲ့ အရေးအသားလေးတွေကို တော်တော်ကြိုက်မိပါတယ်
ဘ၀မှာရှိတဲ့ လောကဓံကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အသက်အပိုင်းအခြားလေးတွေကို ခံစားသွားပါတယ်။
ပို့ စ်လေး ကောင်းလိုက်တာဗျာ။
Dec 17, 2008, 11:27:00 PM
အဲဒါ လောကဓံ ဟုတ်လို့လား-
လောက ဖြစ်စဉ် တခုပဲမဟုတ်လား..
ဓံ မခံရလဲ.. ပြောင်းလဲ ရွေ့လျောခြင်းကတော့.. သူ့အတိုင်း ..သွားနေမှာပဲလေ။ အဲ- ကြားကာလတွေမှာတော့.. လက်ခံရ ခက်ခဲကောင်းခက်ခဲ မှာပဲ..အထူးသဖြင့်..အခု..ယခု လို..အရွယ်များ-း)
Dec 18, 2008, 1:28:00 AM
ရယ်လိုက်၇င် မျက်လုံးထောင့်စွန်းမှာ ပေါ်စပြုနေတဲ့
ကျီးခြေထောက်တွေကို အောင့်သက်သက် စတင်လက်ခံနေချိန်ဖြစ်ပါသည်။
တရားတွေရနေပြီလား။ မပူပါနဲ့ ပူရင် မြန်မြန်အိုတယ်။
Dec 18, 2008, 8:47:00 AM
အမမှာတော့ စိတ်က ကြီးမလာဘဲ အသက်ပဲ ကြီးလာတာ ခက်တယ်။ အဲဒီ အရေးအကြောင်းတွေက ကိုယ့်ကို သတိပေးတဲ့ reminder တွေ ထင်ပါရဲ့။
Dec 18, 2008, 11:39:00 AM
လောကဓံလား လောက ဒဏ်လား ကိုစေးထူးရေ ..
ကျနော်က ဇရာရဲ့ အရေးအကြောင်းတွေကို မျက်နှာပေါ်မှာ သတိထားမိတော့ ဒါတွေဟာ အသက်အရွယ်ကြောင့်ရော၊ လောကဓံမှာ လှုပ်ရှားရုန်းကန်ခဲ့ရတာတွေရောကြောင့်လို့ တွေးပြီး ခေါင်းစဉ်ကို `လောကဓံ´လို့ပဲ ပေးလိုက်တော့ ရေးထားတဲ့စာနဲ့ အံနည်းနည်းချော်သွားပုံရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဖတ်ရှုထောက်ပြတဲ့ မောင်နှမများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်ကိုလဲ နည်းနည်းဖြည့်ပြီး ပြန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။
Dec 18, 2008, 12:09:00 PM
ဘယ်နှစ်ကြောင်းရှိလဲ ရေထားလိုက်သေးလား..။ ဟား..ဟား..။ မရောက်တာကြာလို့ သတိရလို့ သက်သက်လာလည်တာ အစ်ကိုရေ..။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဆီဗုံးကြီးလဲ ဖြုတ်ထားပုံရတယ်...။ အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာပဲ ၀င်အော်သွားတာ...။ ဒီပို့စ်အောက်က ပို့စ်သုံးခု လောက်လဲ ဖတ်သွားတယ်...။ အားလုံးကောင်းတယ်..။ တကယ်ပြောတာ...။ သီးသန့်တော့ ထပ်မရေးတော့ဘူး..။ တာ့တာ :)
အရွယ်က စကားပြောနေပြီ ကိုစေး ။ နီးနီးဝေးဝေး ပြေလို့့တော့ လွတ်ဖူးဗျ ။ :)
Dec 18, 2008, 5:48:00 PM
Hi KoSayhtoo, Very nice to read....agood post as usual. Haveagood day! :)
Dec 18, 2008, 8:07:00 PM
ငါသည်တနေ့အိုရမည်မှာ အမှန်၊ ငါသည်တနေ့နာရမည်မှာ အမှန်၊ ငါသည်တနေ့သေရမည်မှာ အမှန်။ ပြင်ထားကြရမှာပေါ့ ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့....
Dec 18, 2008, 11:43:00 PM
အယ် ကြည့်ကစမ်း မှန်ကြည့်ပီး ပြုံးပြန်ပြီ
အနော်က အဲ့ပုံကို မြင်ကြည့်တိုင်း သိပ်ရယ်ချင်တယ်နော် အဟိဟိ
Dec 19, 2008, 2:37:00 PM
Dec 20, 2008, 5:34:00 AM